‘वडाको विकासमा दत्तचित्त भएर लागेको छु’ - Tulsipur Online
‘वडाको विकासमा दत्तचित्त भएर लागेको छु’
Posted by News Desk | २८ आश्विन २०७७, बुधबार ११:०२ |
दाङमा एकसय वडा छन् । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि सबै वडामा आएका जनप्रतिनिधिले विकास निर्माणलाई जोड दिएका छन् । घर आँगणमा सरकार भन्ने नारासहित आएका जनप्रतिनिधीहरुले अहिले जनताका समस्या समाधान गर्न तर्फ ध्यान दिएका छन् । यसैसन्दर्भमा तुलसीपत्र राष्ट्रिय दैनिकका संवाददाता प्रिया स्मृती गजमेरले दाङको राजपुर गाउँपालिका वडा नं. ७ का वडाध्यक्ष भीमबहादुर खड्कासंग कुराकानी गर्नुभएको छ । –सम्पादक
बिहान १० बजे कार्यालय जाने, सेवाग्राहीको कामका लागि सहजीकरण गर्ने, उनीहरुको समस्या, गुनासा सुन्ने र समाधानका लागि पहल गर्ने, गाउँपालिकाले बैठकका लागि बोलायो भने त्यहाँसम्म पुग्ने, कोरोना भाइरसले देशलाई नै त्रसित बनाएको छ स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर जनताको सेवा मै लागि परेको छु ।
वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएको झन्डै तीन वर्ष पुग्दैछ, यो अवधिमा के–कस्ता कामहरु गर्नुभयो ?
म वडाध्यक्षमा जितेर आइसकेपछि वडामा गर्नु पर्ने धेरै काम मध्ये सडकको कामलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छु । नयाँ र पुरानो बाटोलाई फराकिलो बनाउँदै गाउँ–गाउँसम्म मोटर पुग्ने भएका छन् । वडा नम्बर ७ मा पर्ने जति पनि बस्तीहरु छन् अहिले ति बस्तीमा पुग्न एकदमै सहज भएको छ । त्यस्तै विद्युत बिस्तार, नयाँ पोल खरिद, तार विस्तारका काम भैरहेका छन्, भने धेरै जसो गाउँमा विद्युत बलिसकेको छ । तर, नाका क्षेत्रमा विद्युत बिस्तार हुन् नसक्नु दुःखको कुरा हो । सानो लगानीमा गर्न सकिदैन त्यसका लागि गाउँपालिका हुँदै प्रदेश सरकारलाई त्यस क्षेत्रमा विद्युत विस्तार गर्नका लागि आग्रह गरेको छु ।
भौगोलिक हिसाबले राजपुर गाउँपालिका दाङकै अत्यन्तै बिकट क्षेत्र हो । यो क्षेत्रमा पानीको अत्याधिक समस्या रहेको छ । अझै पनि खोलाको पानी पिउन बाध्य भएका छन् । सबै गाउँसम्म पिउने पानीको व्यवस्थापन भएको छ । कतिपय ठाउँमा योजनाको काम पनि भैरहेको छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आउनुअघि भएका संरचनाहरु जीर्ण हुँदै गएकाहरुलाई पुनःमर्मत गरिएको छ, पानी, बत्ति र सडक नभएको स्थानमा पुगाउने काम भैरहेको छ ।
वडा नं. ७ का सबै बस्तिबस्तीमा शुद्ध पिउने पानी, गोरेटो बाटोलाई मोटर बाटोमा परिणत गरिएको, भौतिक पूर्वाधारका कामहरु सम्पन्न भएका छन्, त्यस्तै खोला तटमा रहेका घर, सामुदायिक विद्यालयलाई संरक्षण गर्नका लागि तटबन्धको काम भएको छ । नाका वारीका बस्तीलाई नाका पारि रहेका बस्तिसंग जोड्ने नयाँ ट्रयाक खोलिएको छ भने नाका क्षेत्रमा नेपाल टेलिकमको टावर राख्ने भनेर सर्भेको काम पनि सकिएको छ । जे होस् वडा नम्बर ७ मा प्रत्यक्ष जनतालाई लाभ हुनेगरी हरेक वर्ष विकासे योजना अन्तर्गत काम गरिएको छ ।
काम गर्ने क्रममा के कस्ता चुनौती आए, ति चुनौतीलाई कसरी समाधान गर्नुभयो ?
काम गर्ने क्रममा चुनौती न आएको हैन । एकाघरको परिवारमा त सबैको मन मिल्दैन, विचार मिल्दैन अनि कुरा मिल्दैन भने वडा भरिरहेका हाम्रा जनताको त झन् के कुरा गर्नु ? कसले कता के भएन भन्छ, कसले उता के भएन भन्छ तर म सार्वजनिक पद्धारण गरिसकेपछी सबै जनतालाई एकै किसिमको ब्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछु । समस्या आयो भन्दैमा भाग्ने हैन त्यो समस्या के हो पहिचान गरेर समाधान तिर लाग्यो भने सफल भइन्छ । सायद यसैको उपज होला आजसम्म आएका सबै चुनौती अनि समस्याहरु समाधान भएका छन ।
सेवाग्राहीले भनेको समयमा सेवा पाएका छैनन् भन्ने गुनासो गर्छन् नि ?
त्यो सरासर गलत हो, म वडाध्यक्ष जितेर जुन दिन वडा कार्यालय जान शुरु गरे त्यो दिनदेखि अहिलेसम्म कार्यालय जान छोडेको छैन । प्रत्येक दिन कार्यालय जाने, सेवाग्राहीका कामको बारेमा चासो राख्ने गरेको छु । जनताकै काम गर्न भनेर मलाई जनताले यो जिम्मेवारी दिएका हुन् मैले त्यो कुरा भुल्न हन्न भन्ने राम्रोसंग बुझेको छु । कागजी प्रक्रिया पुगेर आएका कामहरु आजसम्म कुनै काम रोकिएको छैन, कागजी प्रक्रिया नपुगेका कामहरुलाई आवश्यक पर्ने कागजात लिएर आउनुस् भनेर फर्काउने गरेका छौं । आजसम्म अनावश्यक रुपमा कसैलाई पनि दुःख दिने काम मेरो वडा कार्यालयबाट भएको छैन ।
स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा गरेका केही कामहरु बुँदागत रुपमा बताईदिनुस् न ?
मेरो वडामा चारवटा स्वास्थ्य इकाई केन्द्र स्थापना गरेर स्वास्थ्य सेवा प्रवाह भैरहेको छ । सिक्टा, गोठुवाखोला, डगमारा, भैसाहीनाकामा स्वास्थ्य इकाई केन्द्र स्थापना गरिएको छ । सामान्य बिरामी हुँदा पनि कि भारत जानु पर्ने कि दिनभरको बाटो हिडेर लमही आउनु पर्ने बाध्यता हटेको छ । टाउको दुखेको, झाडापखाला लागेको, ज्वरो आएको, महिला सम्बन्धि बिरामीका लागि अहिले ति स्वास्थ्य इकाई केन्द्रबाट औषधी दिने गरिएको छ । ति स्वास्थ्य ईकाई केन्द्रमा औषधीको अभाव हुन् नदिने त्यहाँका स्वास्थ्यकर्मीसंग बेलाबेलामा सम्पर्क भैरहन्छ । मैले उहाँहरुलाई बारम्बार भन्ने गरेको छु कसैले पनि समयमा सेवा पाएँ, वा औषधी पाएन भनेर गुनासो सुन्न नपरोस् भनेर । त्यस्तै शिक्षामा वडामा रहेका सबै विद्यालयमा धेरै–थोरै बजेट विनियोजन गर्दै कुन विद्यालयमा के कुराको खाँचो छ त्यो पहिचान गरेर काम भएका छन् । वडाभरि रहेका विद्यालयको नाम र त्यहाँ विनियोजन गरेको बजेटको बारेमा भन्दा लामै होला त्यसैले कुनै विद्यालयमा पठनपाठन गर्ने भवन निर्माण भएको छ, कतै शौचालय बनेका छन् भने कतै छात्रावास अनि कतै छात्रामैत्री भवन निर्माण गरेका छौं ।
मेरो वडाको बारेमा चासो लिदै यहाँसम्म आएर जनतासम्म पु¥याउन सहयोग गर्नुभएकोमा तपाईलाई धन्यवाद छ । जनताको काम गर्न अझै बाँकी छ, समयले साथ दियो र कोरोनाले बचायो भने बाँकी रहेका कामहरु पूरा गर्नेछु । काम गर्ने क्रममा कहिँकती कमी कमजोरी भएका हो ।
Previousबुढेसकालमा झुपडीको बास
Nextकोरोनाको नियन्त्रण: लकडाउन होईन, सचेतना
देशभर १०६६ जनामा कोरोना पुष्टि